Iindaba -Umsebenzi wevalve yokutshekisha kukuqinisekisa ukuba iphakathi kwindlela yokuhamba kombhobho ngaphandle kokuhamba kwakhona
Jonga ivalve, ekwabizwa ngokuba yivelufa yokutshekisha, ivelufa yokuhamba, ukujonga ivalve okanye ukujonga ivalve, indima yayo kukuqinisekisa ukuba umjelo wokuhamba kombhobho ngaphandle kokuhamba kwakhona. Ukuvulwa kunye nokuvalwa kwevalve yokutshekisha kuxhomekeke kumandla okuhamba kwaphakathi ukuvula nokuvala. Jonga ivalve yeyimveliso yevalufa ezenzekelayo, jonga ivalve ivumela kuphela indawo ukuba ihambe kwicala elinye lombhobho oza kuyisebenzisa, ukuthintela ukwenzeka kokubuya kwakhona okuphakathi. Inoluhlu olubanzi lwezicelo, kwaye inokusetyenziswa kwimilinganiselo emikhulu kunye nemincinci, kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo nakwisikhululo samandla sombane ophezulu.
Umgaqo wevalve yokujonga: ivalve yokujonga evulekileyo ibhekisa ekuthembekeni kokuhamba okuphakathi ukuya kuvula idiski, isizathu esifanayo sokuhamba kwakhona okuphakathi ukukhuthaza idiski kwaye ivaliwe, jonga ivalve yaziwa ngokuba yivelufa yokujonga, indlela enye , ukubuyela umva kwevalve kunye nevalve yoxinzelelo lwasemva. Owona msebenzi uphambili wesivingco kukuthintela ukubuyela umva kwendlela, ukuthintela ukuguqulwa kwempompo kunye nemoto eqhubayo kunye nokukhutshwa kwesiqulatho sesikhongozeli. Isetyenziselwa ukhuseleko kukhuseleko kwiinkqubo ezincedisayo apho uxinzelelo lunokunyuka ngaphezulu koxinzelelo lwenkqubo.
Jonga ukuhlelwa kwevalvevu: jonga ivalve ubukhulu becala isetyenziselwa ukuthintela ukusetyenziswa kokuhamba kwemithombo yeendaba kubuyela kumbhobho. Ivelufa engezantsi kunye nevalve yedata evalwayo nayo yeyenkqubo yevalve.
Jonga ivalve inokwahlulwa ibe luhlobo lokunyusa, uhlobo lwe-swing, uhlobo lwediski yesithathu:
Uhlobo nokuphakamisa yahlulwe nkqo kunye tye iintlobo 2, isakhiwo nokuphakamisa ihamba ecaleni axis.
(1) Phakamisa uhlobo lwevalve yokujonga cwaka esetyenziselwa unikezelo lwamanzi kunye neemfuno zobunjineli zokuhambisa amanzi kumbhobho; Kwangaxeshanye, inokufakwa kwindawo ephuma kuyo impompo, kwaye inethiwekhi yombhobho enoxinzelelo oluphezulu (PN2.5Mpa) yimveliso ebalulekileyo yevalvevu yokujonga ifuthe elingangeni manzi.
(2) Ukuphakamisa uhlobo lwesilencer yokukhangela ivalve ilungele unikezelo lwamanzi aphakamileyo kunye nenkqubo yokuhambisa amanzi kunye nempompo, engafanelekanga kwimibhobho yelindle.
(3) Horizontal itsheki ivala ilungele ukuntywila, umjelo, impompo yelindle, ngakumbi inkqubo yogutyulo kunye nodaka.
Uhlobo lwe-swing lwahlulwe lwaba luhlobo lwe-valve enye, uhlobo lweevalve ezimbini kunye nohlobo lweevalve ezininzi. Uhlobo lwe-swing lwakhiwo lukhethwe ngokweziko lokujikeleza komxhuzulane.
(1) Ukukhetha uhlobo oluvulekileyo lokujonga irabha yokufaka isetyenziswa kwinkqubo yothungelwano lombhobho wamanzi ezidolophini, engafanelekanga kumbhobho wamanzi amdaka onentlenga eninzi.
(2) Uhlobo lwe-Swing valve yokujonga ivalve inoluhlu olubanzi lokusetyenziswa, inokufakwa kunikezelo lwamanzi kunye nomjelo, ipetroleum, imichiza, isinyithi, umzi mveliso kunye neminye imibhobho, elona xesha lifanelekileyo lezithintelo zendawo.
Isakhiwo sesitya sihamba ngqo.
(1) Disc idiskhi ivelufa itsheki ivelufa ubukhulu becala esetyenziswa eliphezulu-enyukayo umbane unikezelo lwamanzi, equlathe eendaba ezonakalisayo kunye nogutyulo ekusebenziseni uthungelwano umbhobho womnatha.
Horizontal itsheki ivili ilungele ukuntywila, umjelo, impompo yelindle, ngakumbi inkqubo yogutyulo kunye nodaka.